संसद विघटन प्रस्ताव फिर्ता नगरे प्रधानमन्त्री ओली लाई नेकपाको साधरण सदस्य समेत नरहने गरि कार्वाही हुने ! – AB Sansar
संसद विघटन प्रस्ताव फिर्ता नगरे प्रधानमन्त्री ओली लाई नेकपाको साधरण सदस्य समेत नरहने गरि कार्वाही हुने !
December 20, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on संसद विघटन प्रस्ताव फिर्ता नगरे प्रधानमन्त्री ओली लाई नेकपाको साधरण सदस्य समेत नरहने गरि कार्वाही हुने !
संसद विघटन प्रस्ताव फिर्ता नगरे प्रधानमन्त्री ओली लाई नेकपाको साधरण सदस्य समेत नरहने गरि कार्वाही हुने
सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि कारबाही तयारी गरेको छ। नेकपाको बहुमत पक्षले ओलीमाथि कारबाही तयारी गरेको हो। **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
नेकपा स्थायी समिति बैठक आजै बस्दैछ। बैठकमा ओली लाई संसद विघटन प्रस्ताव फिर्ताका लागि आग्रह गर्ने र अटेर गरे पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाइने सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आज विहानै मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर संसद बिघटनको सिफारिश गरेका हुन।
ओलीले संसद बिघटनको सिफारिश गरेपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ। त्यस अगावै निर्णयबाट फिर्ता हुन दबाब सृजना गरिएको छ। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका छन्। ओलीनिकट अन्य नेतामार्फत् भएपनि ब्याक गराउने प्रयास भएको छ।
२० लाख नगद सहित सम्मानित भए बिजु पार्कि र सुमि मोत्तान;Dancing star जित्ने आश नै थिएन।भिडियो
जनजाति महासंघले भन्यो : जनजाति भएकै कारण कुलमानलाई पुनःनियुक्ति नगरिएको त होइन